HUGH LAUGHTON-SCOTT ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း။ THE RALPH LAUREN MODEL နှင့် INSTA ကျော်ကြားသောနယူးကာဆယ်ဘွဲ့ကြို - သတင်း
Hugh Laughton-Scott ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း။ The Ralph Lauren model နှင့် Insta ကျော်ကြားသောနယူးကာဆယ်ဘွဲ့ကြို
Hugh Laughton-Scott သည် ဦး နှောက်နှင့်အလှအပနှစ်ခုလုံးအတွက်နယူးကာဆယ်ဘွဲ့အတွက်ဒုတိယနှစ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းသမီး - သူခေါ်ဆောင်သွားသည်
ကျွန်တော်တို့အများစုသည် ၁၂၂ ကီလိုဂရမ် Insta နောက်လိုက်များနှင့်ကျော်ကြားမှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နေချိန်တွင် Hugh သည်အလွန်တရာမျက်နှာမဟုတ်ပါ၊ သူ၌ကြီးမားသောအစီအစဉ်များရှိသည်။ The Newcastle Tab သည် Hugh နှင့်အတူ Ralph Lauren ၏ရိုက်ချက်များ၊ Castle Leazes နှင့် Lindsay Lohan နှင့်သူပြေးခြင်းအကြောင်းပြောဆိုရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
တကယ်တော့အောက်စ်ဖို့ဒ်လမ်းမှာရှိတဲ့ငါမက်ဒေါ်နယ်ကိုသွားစဉ် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာရှိနေတုန်းပဲ။ မော်ဒယ်လ်ကိုဘယ်တော့မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ရိုးသားတယ်။ ငါ Storm Models နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် AS အဆင့်ကိုပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးရာသီကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ကြီးမားတဲ့ဒီဇိုင်နာအများစုကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအပြည့်အ ၀ ပါပဲ။ ထိုအချိန်ကစတောမ်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကသူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်းကျွန်ုပ်မသေချာပါ!
ဘယ်ခန်းမတွေထဲ ၀ င်ခဲ့တာလဲ။
ငါ Castle Leazes ၌ရှိ၏ ၂ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်များ၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းစသည့်အရာများကြောင့်ထိုတွင်နေထိုင်ရန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ပုံမှန်သွားနေခြင်းကြောင့်လူအများစုကဲ့သို့အခန်းအပူကိုမရရှိနိုင်ဘဲအမှန်တကယ်မျှော်လင့်နေမည်။ ပြန်လာ။
အဘယ်ကြောင့် uni နှင့်အတူအနှောက်အယှက်?
uni ကိုကျွန်တော်မလွတ်လိုခဲ့ဘူး၊ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းပုံသဏ္asာန်တူသလောက် uni သည် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်။ ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကချိန်ခွင်လျှာကယ့်ကိုမှားယွင်းနေတယ်, ဒါပေမယ့်ငါသညျငါ၏ resits ပျက်ကွက်ငါ့ပထမနှစ်တွင်၏အများကြီးပျောက်ဆုံးတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ယခုငါစက်တင်ဘာလ၌တဖန်သင်တန်းကိုစတင်ရန်ရှိသည်မဟုတ်, ဒီတော့ကျော်ကြားဖွယ်ကောင်းတဲ့မဟုတ်။
ငါဝေးအခါငါတကယ်တကယ်လက်လွတ်ကြဘူး။ အားလုံးဟာပုံရသည်၊ နုိုင်ငံခြားအရာများစွာဖြင့်အတော်လေးအရောင်တောက်ပသည်၊ သို့သော်သင်မည်သည့်ဟိုတယ်ဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်သည်။ လူအများစုကသူတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်ပေါင်းသင်းလိုခြင်းမဟုတ်ဟုငါထင်သည်။
ယနေ့အထိသင်၏အကြီးမားဆုံး / အကြိုက်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည့်အရာကဘာလဲ။
ငါဘွတ်ကင်လုပ်တဲ့ပထမဆုံးပြပွဲက Hyde Park ရှိ Burberry အတွက်ဖြစ်ပြီးအဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အမြဲတမ်းအထူးခြားဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Westminster Abbey ရှိ Gucci Cruise show ကိုလည်းကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်လန်ဒန်ကဖြစ်လို့လမ်းလျှောက်ဖို့လာတယ်၊ ငါမကြာသေးမီကတော်တော်အေးမြခဲ့သည့်ပိုလို Ralph Lauren မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရိုက်ကူး။ သူ့ကိုသူ 'အလွှာ' မှာရိုက်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ Central Park မှာရှိတဲ့နှစ် ၅၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာသူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။
ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူသွားရန်အကြိုက်ဆုံးနေရာဖြစ်ကောင်းပုံမှန်ရုပ်ရှင်ရုံရက်စွဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်မဝယ်ခင် Tesco ကိုအမြန်သွားပါ။ ကိုယ် ၀ န်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူမ၏ထိပ်ကိုအောက်သို့ချလိုက်ပါ။ ထို့နောက် shitty ရုပ်ရှင်ကိုခံစားပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့နွေ ဦး ရာသီကငါတကယ်ပျော်မွေ့ခဲ့တဲ့ Naomi Campbell စီစဉ်ပေးတဲ့ Fashion for Relief ပြပွဲကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ငါသူနဲ့တော်မှန်တဲ့စကားပြောခွင့်ရတယ်၊ သူကူညီနေတဲ့မော်ဒယ်အားလုံးကိုသူတကယ်ပဲတန်ဖိုးထားလေးစားပုံရတယ်။
Lindsey Lohan နဲ့ခင်ဗျားရဲ့ပြေးပွဲအကြောင်းပြောပြပါ။
ငါ Gucci Cruise ပြသပြီးတဲ့နောက်ဆေးလိပ်သောက်တဲ့နေရာရောက်နေပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးလဲကျသွားတယ်။ သူတို့လဲကျပြီးကြမ်းပြင်ကိုမထိခင်ငါဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါပြန်ကောင်းလာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ငါတောင်းပန်လိုက်ပြီးသူမအားသူမသဘောပေါက်လိုက်သည်။ သူမသည်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်ထဲမှာယူခဲ့ပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံးနယူးကာဆယ်လ်ညဥ့်နက်မှထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုထက်အမှန်တကယ်ညပေါ်တွင်မူတည်သည် ငါဒီနှစ်အများကြီးထွက်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါတကယ်နောက်ကျနယူးကာဆယ်လေဆိပ်ကနေပြန်လာပြန်လာနှင့်လူတိုင်း pres ရှိခြင်းနှင့်ငါ join ဖို့စွမ်းအင်ကိုစုဆောင်းသည့်အခါအမြဲတမ်းပျော်စရာညပါပဲ။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာတွင်လက်တွေ့ကျသောအခါငါဖုန်းခေါ်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကော်ဇောအမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်စားကော်ဇောကိုလမ်းလျှောက်ချင်လား။ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါလက်ခံခဲ့သည်!
သငျသညျသတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် adderall အကူအညီနဲ့မ
ငါမူလကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဘယ်အလုပ်ကိုမှမလုပ်ချင်ဘူး၊ ဒါကနည်းနည်းလေးဝမ်းနည်းစရာလို့ထင်တယ်။ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်၏အစ်မသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်အလုပ်လုပ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အတ္တကိုမေ့သွားပြီးကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေခြင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုဤအကြံဥာဏ်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါကပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရန်နေ့တိုင်း 15 မိနစ်ထွက်ယူပါ။
မင်းမှာ DM မကျန်တာရှိလား။
Instagram DM တွေဟာတော်တော်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဝန်တွေလည်းချိုတယ်။ သူတို့ကငါ့အလုပ်ကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာပဲပြောကြတယ်။ အခြားသူများကမူကျွန်ုပ်ကိုတစ်နှစ်လျှင်သုံးကြိမ်စာပို့ကြသည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးပျော်စရာကောင်းပေမယ့်ကြီးမားတဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ထိုက်တန်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် NearMISS တွင်အထူးသီးသန့်အွန်လိုင်းအဝတ်အစားစတိုးကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်၏ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများကသန်းနှင့်ချီသောအဝတ်အစားများကိုပေါင်သန်းချီ။ မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များကိုထိုပစ္စည်းများကိုပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖက်ရှင်ကိုပိုမိုသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန်စဉ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ပါ။
နောက်ဆုံးသင်ပြောင်းလဲချင်သည့်ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှိပါသလား။
မော်ဒယ်များ၏ကုသမှုသည်အလွန်ထိတ်လန့်စရာကောင်းနိုင်သည်။ အချို့သောသရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ဖောက်သည်များသည်မော်ဒယ်များကိုလူများအဖြစ်သဘောထားကြသည်မဟုတ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ကြသည်။ မော်ဒယ်များ၏သက်တမ်းကိုထိန်းညှိသင့်သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်တိုကျို၌အလုပ်လုပ်စဉ်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိမိန်းကလေးများသည်အိမ်မှဝေးသောနေရာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်လခဟာတန်းတူညီမျှရေးကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ငါကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အလုပ်အများစုအတွက်မိန်းကလေးတွေရရှိတဲ့အလုပ်ရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုငါရမယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်လစာသည်ကျား / မမဖြစ်သင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်၊ ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းသည်တန်းတူလစာနှုန်းကိုလည်းချမှတ်သင့်သည်။